Kuzohlangana izingwazi zomasikandi | News24
Kuzohlangana izingwazi zomasikandi
IZITHOMBE: ZITHUNYELWEUmfana waphesheya koThukela uKhuzani uyobe naye eshaya imicu yakhe adume ngayo ngoMgqibelo.
KULINDELEKE ukuba kudabuke imbadada kunqamuke intambo kalidi kunswininize inkositini ngempelasonto njengoba kuzobe kuhlangene izinkunzi zomasikandi emcimbini waminyaka yonke ozobe ubanjelwe e-Ugu Sport and Leisure Centre ngoMgqibelo. Lo mcimbi uzobe ubophele izingwazi zikamasikadi okuhlanganisa kuzona uPhuzekhemisi, iChwane lebhaca, uKhuzani, iGcokama Elisha, uShwi Nomntekhala, Amageza amahle, uQhosha DSD Osaziwayo,uMbuzeni, iThwasa Lekhansela, uBuselaphi, uThokozani Langa, iNyoni Emhlophe, Imbongolo kanye nosaziwayo bomculo wekwaito okubalwa kubona uProffessor Langa, uCharacter, iMalini kanye nabanye abaningi.
Lo mcimbi uyobe ubanjwe esiteji nguMdonso noZimdola ongungabasakazi boKhozi FM. Amasango ayovulwa ngehora le-9 ekuseni, ngokusho komhleli womcimbi uProffesor Langa.
“Masisho ukuthi amavuvuzela angeke ashaywe ngaphakathi ngoba sibalekela ukuthi kubekhona abaculi abangeke bakwazi ukuthola ithuba,” kusho yena. Uthe nezokuphepha zizobe ziqiniswe kakhulu kulo mcimbi kanti amabhodlela azobe engavumelekile ngaphakathi ezinkundleli zemidlalo.
Uthe amathikithi ayobe etholakala esangweni ngemali engama-R100 kuwonkewonke, bese kuthi awezicukuthwane wona abize imali engana-R350.